ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (August 2014) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (August 2014)
Posted by စာ ကြမ်းပိုး on Sep 8, 2014 in Arts & Humanities, Community & Society, Entertainment, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 23 comments
ဩဂုတ် လ အတွက်တော့ တခြား ထွေထူး မပြောတော့ပါဘူးဗျ နော့။
ပို့(စ) ညွှန်းလေးတွေသာ ကြည့်ပါတော့။
ခေတ်သစ်ဈေးလည်ခြင်း – ကိုပေါက်(မန္တလေး)
ဟိုး အရင် ရပ်ကွက်အိမ်ဆိုင်မှ စ ခု နောက်ဆုံးဝယ်နေကျနေရာများဖြစ်တဲ့ မီနီမတ် တွေ အကြောင်းပါ။
ကိုပေါက် ရဲ့ ရေးဟန် အတိုင်း အတော် နှံ့နှံ့စပ်စပ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားပါတယ်။
ခေတ် အလိုက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဈေးသည် ဈေးဝယ် ဟန်တို့ရဲ့ နောက်ကို နည်းပညာ၊ အသိစိတ်ဓာတ်၊ ဝန်ဆောင်မှုတို့ က အမှီလိုက်ရဲ့လား ဆိုတာ အတွေးပွါးစရာ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးဖြန့်ကျက် တွေးမိတာက…….
– တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိတာရော (ဥပမာ လွယ်ကူတဲ့ စားပွဲတို့ နေ့လည်စာတို့ကို ဘိုလိုသုံးတာ)
– တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိပေမယ့်လည်း မတတ်သာလို့ မွေးစားသား စကားလုံးတွေသုံးရတာရော
(ဆိုင်ရာ ခြားနားတဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်က ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေ)
တီထွင် ကြိုးစားပြောင်းလဲ သုံးစွဲပါမှ မြန်မာစာပေတိုးတက်မယ် မြင်ပါတယ်။
– စပ်ကြား စကားလုံးတွေ
အပေါ်က စကားလုံး ၃မျိုးကတော့ ဘာသာစကားတိုင်းမှာ ၀င်ရောက် ရောနှော ပျံ့နှံ့နေတာ ကို သတိပြုမိစေတဲ့ ဖတ်ရတာ
စိန်ကြက်ဆင်နှင့် ဒန့်ဒလွတ်ချောင်းက ခေါင်းလောင်း မကြီးတကြီးအမှု – ကျောက်စိမ်း တိန်ညင်
ဒီဆြာရဲ့ သရော်စာ ရေးလက်က အင်မတန် ထက်သလို သတင်းကြီးနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို
အခြေထားပြီး ရွာထဲက သူတွေ တယောက်မှ မနေရအောင် အကွက်ချ ဇာတ်ကောင်စားရိုက်သွင်းရေးပြသွားတာလည်း
ကွက်တိ မို့ ပြုံးရယ်ဟား ရတဲ့ ပိုစ့်ပါ။
တကယ့် ခေါင်းလောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းတွေကို လည်း ကောမန့်အနေနဲ့
အားဖြည့်ထားတဲ့ သဂျီးရဲ့ စာတွေကလည်း ပိုစ့်ကို အားဖြည့်ထားတာ တမုံ့။
ကာယကံရှင် လက်ခံရင် ဖေ့စဘုတ်မှာ တက်ပြောင်ထားတဲ့
ပြည်တော်သာ ၀င်းအတွင်းက ဂက်စ်အိုးအဖုံး မတောင်းပန်ရင် ပြန်မပေးဘူးဆိုတာလေးပါ
တွဲပြလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင့် ….
(သူ့ ဟာသဥာဏ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့သဘောပါ)
ကျနော်နဲ့ ဟိုကလေးမ – နောင် ရိုး
အပိုင်း ၃ ပိုင်းရှိပါတယ်။ ကလေးမကို စ မြင်ဘူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး က အစ နောက်ဆုံး အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက် အဆုံး
ကလေးမရဲ့ ကာရိုက်တာ ပေါ်လွင်အောင်…
စာရေးသူ ရင်ထဲက ချစ်စနိုးစိတ် စတာတွေကို တပြိုက်နက်ဖော်ပြ
စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးသွားနိုင်လို့ သဘောကျခဲ့ရတဲ့ ပို့(စ) တွေပါ။
ဒီလိုရေးလက်မျိုး ရွာထဲမှာ မကြာခဏ မြင်ချင်ပါတယ် ကိုနောင်ရိုးး..
ကျွန်မကလေးတွေကတော့ဒီလိုပဲရှိတယ် (၂)- •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨
ကလေးအတွေးနဲ့ ကလေးအမေး တွေက တခါတလေ လူကြီးတွေကို အကျပ်ရိုက်စေတာကို
ခပ်သောသောလေး ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ပါ။ ဘုရား ရှိခိုး ဆိုလို့ အိန္ဒရိယ ပစ္စယော ကို
ကျနော်တို့လည်း ငယ်စဉ်က အဲ့လို ထင်ခဲ့ဖူးတာလေး သွားသတိရမိရဲ့။
နည်းနည်း ကြီးလာတော့မှ နောင်တော်တွေ ပြောပြဖူးတဲ့ ဟာသလေးတပုဒ် သွားသတိရမိတယ်။
ပုံပြင်လေးက သည်လို (ဟိန္ဒူတွေထင်ပါရဲ့) သူငယ်ချင်း၂ယောက် ရှိရာ တယောက်က ဆာမိ တဲ့ (ရွာထဲက ဦးဆာမဟုတ်ပါ)
ဘုန်းကြီး ဆွမ်းမစားခင် လိုက်ဆိုခိုင်းတာက….
… …. သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
အဲ့သည်မှာ ကျန်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မူတူး က သူ့အိမ် ဆွမ်းကပ်တဲ့အလှည့်မှာ ဘုန်းကြီးကို
… …. သရဏံ ဂစ်မူတူး
မဖြစ်ရသလဲ ဆိုပြီး ကွန်ပလိန့်တက်တဲ့အကြောင်းလေး ရယ်။
စောရိုး ရိုက်စားခြင်းး – ကျွန်တော်၏ကျောင်းသားဘ၀များ ( အပိုင်း ၂ )- sorrow
ကိုရင်ဆောရိုး စာ က အရေးသွက်သွက်နဲ့ ပါးစပ်မစေ့ရတဲ့ စာမျိုးပါ ။
နောက်တပုဒ် လောက်မှာ ခံခဲ့ရတဲ့ လူမမာ ပြန်သိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေး ဖတ်ရရင် ပိုပြည့်စုံသွားမယ် လို့
ကျောင်းသားဘ၀ (အထူးသဖြင့်) သက်တူရွယ်တူ ၀ါသနာတူ အဆောင်နေကျောင်းသားဘ၀
ကိုဖြတ်သန်းလာသူတွေအတွက် ငယ်ဘ၀အောက်မေ့စရာ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း
ပြန်ပြောပြချင်စိတ်ပေါက်စရာ ပိုစ့် ၂ပုဒ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း။
ခေါင်းခနခန လျှော်လို့ ဆံပင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါသလား ?? By Shwe Ei
မရေးတာ ကြာပြီဖြစ်သော ရွှေအိရဲ့ လက်ရာပါ။
ကောင်းမွန်ပြီး ပျိုမေတို့ ဖတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးမို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးသို့တစ်ခေါက်……………- Ma Ma
ဝေဖန်တတ်သူဟာ ဆိုးတာ ကို ဝေဖန်နိုင်သလို ကောင်းတာကိုလည်း ချီးကျူးနိုင်ရပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုကို တောင်းဆိုတတ်ရင် ပြောင်းလဲ လာမှုကိုလည်း ကြိုဆိုတတ်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒီ ဆောင်းပါးလေးကတော့ ဗဟို အမျိုးသမီးဆေးရုံမှ ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြင်တွေ့ရေးသားထားတာမို့၊
ပြောင်းလဲမှုကိုရော အသိအမှတ်ပြုနိုင်မှုကိုရော ကျနော်တို့ ကြိုဆိုရမှာပါ။
စကားလုံးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက်_သော်ဇင် ၊လွိုင်ကော်၊- သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)
သက်သာချောင်ချိရေးဆိုတဲ့စကားလုံး။ သက်တော့သက်သာပါတယ်။ ချောင်ချိကုန်တာတွေက အသပြာအိတ်တွေ။
ခေတ်မီလာပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးကုန်တာက အသုံးအစွဲတွေ။
ဟုတ်ပါတယ် စာမတတ်သူတွေကို လျော့ချပစ်ပါတယ်။ လုံးဝ မသင်ရဆိုပြီး ပိတ်ပစ်တာမျိုးပေါ့။
အဲဒီ မလား မလားတွေနဲ့…
သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) ရဲ့ အရေးအဖွဲ့တွေပါ။
ဆက်သွယ်ရေး ကမ်ပနီ ၂ ခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံ မှာ စတင်လာတာက အစပြုပြီး ကြုံတွေ့ခံစားရတာလေးတွေကို “အောင်မင်း” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင် က တစ်ဆင့် ရသမြောက်စွာ ပြောပြထားတာမို့ ဖတ်ရှုစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
စက္ကူကြယ်ဖန်ပုလင်း @ သူ့….ကိုပြောပြချင်လိုက်တာ – အောင် မိုးသူ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က တွေ့ဆုံ ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူလေးကို ပြောပြချင်တာလေးတွေကို ဇာတ်ကောင် စရိုက်လေးတွေပါ အပါ ပြောပြထားတဲ့ ရသပို့(စ) လေးပါ။
ကိုယ်တွေ့ လို့ ယူဆမိလောက်အောင် အသက်ပါ ပါတယ်။
အဖြူရောင်မီးတောက်ကလေးများ – hmee
အေးမြပါတယ် ဆိုတဲ့ ၅၂၈ သွယ် မေတ္တာနဲ့ ချစ်ရတဲ့ သားသမီး အတွက် ပူပင်ရတဲ့ အပူကို အဖြူရောင်မီးတောက်လေးနဲ့ တင်စား ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါ။
မမှီရဲ့ အ ဖြူရောင် မီးတောက်လေးတွေက ကျနော်တို့ ရင် ကို ကူးစက်တောက်လောင်စေခဲ့ပါတယ်။
ညီလေးအလင်းဆက် နှင့် မြန်မာစာချစ်သူ ရွာသူ/ရွာသားများသို့ အပိုင်း(၃) By ရွှေညာသား
ဟုတ်ကဲ့။ စာကြမ်းပိုးတို့ကို စောင့်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေညာသားရဲ့ ပို့(စ) အပိုင်း (၃) ပါ။
ထုံးစံ အတိုင်း ခင်မင်သူတို့ မြန်မာစာချစ်သူတို့ နဲ့ စည်ကားခဲ့တဲ့ ပို့(စ) ဖြစ်ပါတယ်။
အမြင်မတူသူတွေဆိုတာ အမြဲရှိနေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ရွှေညာသား အနေနဲ့ ပို့(စ) နောက်ပိုင်းတွေကို ဆက်လက် တင်စေချင်ပါကြောင်း တောင်းဆိုလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်မမှာ မင်းသမီး By မွသဲ ( 17082011 )
မွသဲရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အလွဲ အချော်လေးတွေကို တင်နေတဲ့ထဲက တစ်ပုဒ်ပါ။
စိတ်ညစ်ညူးတဲ့ အချိန် ဖတ်မိရင်ကို အားရပါးရ ပြုံးနိုင်မှာမို့ စိတ်အာဟာရ အတွက် ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အချစ်ကို ဖွင့်ဆိုကြည့်တဲ့အခါ…. By Mr. MarGa (12512)
ရသ ကိုးပါးစလုံး ရောယှက်နေတဲ့ အရာ….
အဲဒီလို သူ့ အယူ အဆကို ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ ဦးမာဃဟာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အချစ်နဲ့ ရသကိုးပါး ဘယ်လိုဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဘယ်လို ရှင်းပြခဲ့တယ် ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ဗဟိုတည့်တည့် ( ပြတ်ခရွေတောင် ) – pooch
ဒေါ်ပုချ ရဲ့ လက်ရာ အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ပါ။
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံလက်ရာ များရယ် အတွေ့အကြုံ များရယ် ကို စုစည်း ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီးး စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေမဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်လို့ ညွန်းချင်ပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့နေ့ By ဗုံဗုံ
စာရေးကျဲ တဲ့ ဗုံဗုံရဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်ပါ။
စဖတ်ဖတ်ချင်းမှာတော့ သူရည်ညွှန်းတာ တစ်ယောက်လို့ထင်မိမှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးကျမှ ရှင်းလင်းသွားတဲ့ ရေးဟန်ပါ၊
ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ပါ တွဲပြီး ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော် တို့ ရွာထဲမှာ တခြားဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ ပို့(စ) တွေကတော့
ဂျစ်သော အစ်ကိုကြီးသို့ Open Letter
– မြစာကလေး (23122011)
နင် တို့ကို မခေါ်ဘူးဟေ့။
နာ ဩဂုတ်လထဲမှာ ရေနွေးဖြစ်တွေ အများဂျီး တည်ထားတာ ကော်ဖီတောင် ဖျော်ထားသေးတာကို တစ်ပုဒ်မှ မညွှန်းလို့ မခေါ်ဘူးဟေ့။
မဇီဇီ ကလည်း ကိုယ်ရေးတာက ကိုယ့်အလုပ်
ဒါပေမယ့် သူ ဘာကြည့်ရွေးတာလဲလို့တော့ ကျုပ်လည်းစဉ်းစားမရဘူးဗျ
ဖတ်ရွေးနဲ့ စပ်စပ်ရွေးတာလား? ဘာလား ? မသိပါဘူးဗျာ။
စာကြမ်းပိုး ဖတ်ပြီး ရွေးချယ် ညွှန်းတဲ့ ပို့(စ) တွေက ဖတ်ရွေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ..
ဟိုဂျီးဒေါ် ပြောလွန်းလို့ နေမှာ
ဖွင့်ဆိုချက် ပို့စ်က ဒီထဲတောင် ပါလာတယ်
စာဖတ်သူတွေ လွတ်ပြီး ကျန်ခဲ့နိုင်တဲ့ ပို့(စ) လေးတွေကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ရွာထဲမှာ ဘာများဖြစ်နေလဲလို့ ၀င်ကြည့်မိတာ ဖတ်မှတ်ရွေးလား ဘာလား
သာမီးတော့ နားမလည်လို့ ဖတ်ချင်တာတွေ ဖတ်ပြီး ပြန်သွားပါပြီ…..
လစဉ် ရွေးချယ်ညွှန်းဆိုရုံပဲ တင်တဲ့ ပို့(စ) မျိုးပါ မနော်ဖြူလေးရေ
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ ..လူတွေတော်တော်ပျောက်နေတယ်
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ ..လူတွေစာရေးကျဲပါးနေတယ်
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ ..လူတွေကွန်မန့်ပေးနည်းနေတယ်
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ …..
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ ……
.ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ ………………………………………………….အဟွတ် :boss:
ကြမ်းပိုးကြီး ကိုယ်တိုင် ကို ပျောက်နေလို့ ..
မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား ပို့(စ) တင်ထားရပုံပဲ။
အာ့​ပြောတာ​ပေါ့.. reader app ​လေး လုပ်​​​ပေးပါဆို.. အင်​တာနက်​​ကောင်းချိန်​​လေး refresh လုပ်​..ညဘက်​စာဖတ်​.. note ထဲမှာ ကွန်​မန့်​ရိုက်​ထား.. ​နောက်​​နေ့ အင်​တာနက်​​ကောင်းချိန်​ကျရင်​တင်​.. ခု​တော့ ​ပျော်​ရာမှာမ​နေဘဲ.. ​တော်​ရာမှာပဲ ​နေ​တော့မယ်​..
reader app အဲဒါဘာကြီးလည်း…
အွန်​.. သဂျား​ပြောတာပဲ.. လွှတ်​​တော်​ထဲမယ်​ ​အော်​ထားတယ်​​လေ.. ဖုန်းထဲက သတင်း app ​တွေလိုမျိုး.. ဥပမာ.. ဖဘက ​ဦးထွန်းလွင်​အ​ကောင့်​ကို ချိတ်​ထားတယ်​ဆို သူအသစ်​တင်​သမျှ refresh လုပ်​ရင်​ တက်​လာတာ.. အကုန်​ဖတ်​လို့ရတယ်​.. အဲ့လိုမျိုး.. ​သေချာ​တော့ မ​ပြောပြတတ်​ဘူး..
feed reader တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
သဂျီး သိသားနဲ့ လည်ပြီလား
ဥမပါ သစ်ထူးလွင်ဆို ဖဘမှာ တက်သမျှ app နဲ့ feed ယူတယ်လေ
စာကြမ်းပိုးလေးတွေအားပေးတယ်လား…ဘူမှမဖတ်ဘူးထင်တာရယ်..အဟိဟိ ..နောက်အပိုင်းတွေကျန်သေးပေမယ့်..အလုပ်ပိနေလို့ခင်ဗျာ…ကျော်ရေးချင်နေတာ တပိုင်းကိုသေလို့…
ပို့(စ) အားလုံးကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
နိမ့်တုန် မြင့်တုန် ခုန်ရမည်
မြန်မာတို့ရဲ့.. အနုပညာကို.. ဇောင်းပေးချင်သမို့..
ပို့စ်ကို.. သတင်းစာထဲ.. ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့တောင်..တွေးနေမိ…။
ရွှေညာသားကိုလည်း ပို့(စ) တွေ ဆက်လက် တင် စေချင်ပါတယ်။
Could’ve made it if you tried…
ကျောက်စိမ်းခြစ်ကင်း က ထိပ်တက် လို့ပါလား။
စိန်တာကီ ကိုလဲ သတိရကြောင်းပြောလိုက်။
လာအားပေးတဲ့ အရီးမြစာကလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
အစက ရွာထဲ ပိုစ့်သိပ်မတက်ဘူးထင်တာ
သူတို့ထုတ်ပြမှပဲ တကယ်တော့ ရွာထဲ ကိုယ်မရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ကြောင်း အမှန်အတိုင်းသိသွားတော့တယ်…
စိတ်အေးလက်အေး ကွန်မင့်တန်းစီရေးနိုင်တဲ့ ရက်ကလေးတွေ ဘယ်တော့မှများ…….
ပို(စ) တွေက ရှိပါတယ် ဦးပါလေရာရေ။
ဖတ် ဖြစ် တာ မ ဖတ်ဖြစ် တာ ပဲ ရှိကြမှာပါ၊
စာကြမ်းပိုးကို ရေနံဆီလောင်း ဂုံပုချဉ်တယ်…